स्याटेलाइटबाट अस्ट्रेलियाका टापुमा इन्टरनेट पुर्‍याउँदै एलन मस्क - Tech News Nepal Tech News Nepal
नेपालमै बनेको ल्यापटप, जसका लागि पैसा तिरेर ३
स्याटेलाइटबाट अस्ट्रेलियाका टापुमा इन्टरनेट पुर्‍याउँदै एलन मस्क
काठमाडौं । एलन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्सले सन् २०२२ काे सुरूवातदेखि अस्ट्रेलियाको सामुन्द्रिक टापुहरुमा इन्टरनेट पुर्‍याउने भएको छ । अस्ट्रेलियाको संसदीय समितिमा जानकारी दिँदै यसकाे प्रक्रिया थालनी भएकाे कम्पनीले जनाएकाे छ ।
कम्पनीका अनुसार स्याटेलाइट मार्फत उपलब्ध गराइने याे इन्टरनेट सन् २०२१ को अन्त्यसम्म अष्ट्रेलियाका धेरैजसाे भू-भागमा पुगी सक्नेछ । भने, टापुहरुको हकमा अर्को वर्षको सुरुवातमै सुरु हुनेछ ।
यसका लागि कम्पनीले पोलार–अर्बिटमा आधारित स्याटेलाइट प्रयोग गर्ने जनाएको छ । हालसम्म कम्पनीले यस्ता १० वटा स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरिसकेको छ । कम्पनीले स्याटेलाइटकाे संख्या थप्दै इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने याेजना ल्याएकाे छ ।
काठमाडौं । डीटीएच सेवा प्रदायक डिशहोमले पछिल्लो समय इन्टरनेट विस्तारमा विभिन्न प्रविधि भित्र्याइरहेको छ ।
अझै खस्कियो नेपालको मोबाइल इन्टरनेट स्पिड, फिक्स्डमा भने सुधार
काठमाडौं । नेपालको फिक्स्ड इन्टरनेट स्पिडमा सुधार देखिँदा मोबाइल इन्टरनेटको स्पिड भने खस्किएको छ ।
काठमाडौं । एक किलोमिटरसम्म वाई-फाईको सिंग्नल पुग्ने गरी नयाँ प्रविधिको विकास भएको छ । उक्त
ह्वाट्सएपले ल्यायो वेबमा आफूले चाहेजस्तै स्टिकर बनाउन सकिने फिचर
सरकार ! अनलाइन सेवाको नाममा उल्टै सास्ती किन ?
नेपालमै बनेको ल्यापटप, जसका लागि पैसा तिरेर ३ महिनासम्म पर्खिन तयार छन् ग्राहक